HORDHACA: Liverpool vs Stoke City – Gool FM
HORDHACA: Liverpool vs Stoke City
CR Shariif April 28, 2018
( Premier League ) 28 April 2018. Liverpool ayaa kusoo dhaween doonta garoonkeeda Anfield kooxda Stoke City kulan ka tirsan ciyaaraha 36-aad ee horyaalka Premier League.
Kooxda Reds ayaa kula hardameysa kaalinta laabad dhigooda Manchester united, oo ay seddax dhibic ka dambeyaan. Laakiin naadiga Stoke city ayaa kamid ah kooxaha kaalimaha hoose waxeyna ka cararayaan u laabashada horyaalka heerka labaad ee England.
Saacada: 02:30 pm xiliga geeska afrika
Garsooraha: Andre Marriner
Garoonka: Anfield Stadium
Macalinka Liverpool Jurgen Klopp ayaa isku shaan dheen ku sameen doona safka kooxdiisa, Xili ay arbacda dheeli doonaan lugta labaad ee wareega Afar dhamaadka Champions League.
Sadio Mane ayaa laga dabiibayaa dhaawac yar lamana doonayo in dhibaato la galiyo ciyaartan, Halka Alex Oxlade-Chamberlain uu inta ka harsan xagaaga ku maqnaan doono dhaawac jilibkaa.
Stoke labadeeda cayaariyahan ee Maxim Choupo-Moting iyo Kostas Stafylidis ayaa kasoo kabanaya dhaawacyo ay ka qabaan gumaarka iyo feerta.
Glen Johnson weli waa mid shaki uu ku jiro, Iyadoo labada Xiddig ee Saido Berahino iyo Jese mar kale laga walaacayo xaladooda.
Liverpool ayaa marnaba guuldareysan 54 ciyaar oo ay horyaalka kula dheeshay Stoke garoonkeeda waxeyna ka badiyeen 43 kulan, iyo 11 bar baro ah. Taasina waa guuldaro la’aantii ugu dheereed ee gurigeeda ku sameyso marka loo eego kulamada labadn koox iyo taariikh ciyaaraha horyaalka sare.
Si kastaba naadiga Potters lagu naaneyso ayaa badisay kulan lugta labaad ee afar dhamaadka League cup oo ay 1-0 guul ah ku gaareen Anfield bishii January sanadkii 2016.
Liverpool ayaa badineysay sideed kamid ah sagaalkii kulan ee u dambeysay oo ay ka hortageen naadiga Stoke, Laga soo bilaabo guushii Potters ay 6-1 garoonkooda ku adkaadeen maalintii u dambeysay ee xili ciyaareedkii 2014-15.
Safafka macquulka ah kooxaha Liverpool vs Stoke City
Jurgen Klopp Oo Hal Arin Ka Dalbaday Jamaahiirta Kooxda Liverpool, Kahor Kulanka Roma
HORDHACA: Real Madrid vs Leganes